I-Cozy Farmhouse Guest Suite Near Downtown Gilbert - I-Airbnb
I-Cozy Farmhouse Guest Suite Near Downtown Gilbert
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Mark
Ngidale isikhala esinikeza kokubili amandla okuthula nokuthula, okuhlala endaweni ethule, nokho-ke ungaphansi komgwaqo ukusuka kwezinye zezindawo zokudlela ezimatasatasa namabha edolobheni. Kunezinto eziningi ngaphakathi esikhaleni ezikwenza uzizwe usekhaya ukuze uzisebenzise. Ngize ngine-Amazon Echo ekamelweni ukuze ujabulele umculo phakathi nosuku noma usebenzise umsindo omhlophe lapho ulala.
Kungakhathaliseki ukuthi uzele umsebenzi noma uphumele umshado, khululeka kulesi sivakashi esiphumulele esisemgwaqweni onokuthula endaweni enhle! Ukuhamba nje okuyimizuzu emi-4 ukuya edolobheni laseGilbert, lokhu kuyindawo ekahle yakho kokubili ukuphuma ukuze uthole ukudla noma ukuphuma ebusuku. Kunezindawo eziningi ezinhle ongazihlola ngale ndawo emaphakathi!
Le ndawo ayinalo ikhishi eligcwele kodwa ilungele isihambi esidinga izinsiza eziyisisekelo zehhotela, kanye nokuthintwa kokugcina kwesitolo sempahla. Ine-microwave, ifriji, ne-keurig!
4.92 · 184 okushiwo abanye
Uvalelwe endaweni enokuthula emizuzwini engu- ukusuka edolobheni lase-Gilbert nokuhamba ibanga elifushane ukusuka esikhumulweni sezindiza. Zonke izinkathi ezintsha ezifana ne-Whiskey Row, i-Culinary dropout kanye ne-Postino 's eseduze ezingeke zidumaze!
Amabanga ukuya ezindaweni ezithandwayo:
I-Whiskey Row - imizuzu engu-3
Isikhumulo Sezindiza Se-Sky Harbor - imizuzu engu-25
Isikhumulo Sezindiza i-Mesa Gateway - imizuzu engu-20
Umzila Wokuqwala Intaba - imizuzu engu-30
Indawo Yomshado Yasemaphandleni - imizuzu engu-3
Imishado Emapulazini ase-Schnepf - imizuzu engu-30
I-Tempe ASU - imizuzu engu-20
Udinga ukwazi indawo yokudlela yase-Thai ehamba phambili endaweni? Indawo engcono kakhulu yokubamba igeyimu nabanye abangani? Nginenqwaba yeziphakamiso! Ngiyajabula futhi ukuhlanganyela nanoma yiziphi izihambeli zami. Uma ungibona ngingaphandle nomdlwane wami, khululeka ukubingelela.
Uma ufuna indawo yakho, lokho kulungile futhi ngizoqinisekisa ukuthi angikuphazamisi!
Udinga ukwazi indawo yokudlela yase-Thai ehamba phambili endaweni? Indawo engcono kakhulu yokubamba igeyimu nabanye abangani? Nginenqwaba yeziphakamiso! Ngiyajabula futhi ukuhlanga…